अफिससँगै बच्चाको हेरचाह गर्न समस्या भयो ? अप्नाउनुहोस् यी स्मार्ट उपाय « Dainik Online
एजेन्सी । आजभोलि प्राय: धेरै कामकाजी महिलालाई घरको कामसँगसँगै अफिसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निकै समस्या परेको हुन्छ। यदी महिलाले घरको ध्यान बढी दिन थाल्यो भने अफिसको काम छुट्ने गर्दछ। अफिसमा बढी समय दिन थाल्यो भने घर परिवार सँगसँगै बच्चाको करियरमा असर देखिन थाल्दछ। त्यसैले यसका लागि दुबैमा तालमेल मिल्न जरुरी छ। अफिसको काम पनि राम्रो होओस र बच्चाको करियर उज्वल होओस भन्ने चाहनुहुन्छ भने यी उपाय अप्नाउनुहोस।
१) समय तालिका
महंगीसँगसँगै मानिसलाई काम गर्न निकै जरुरी भएको छ। यसका लागि बच्चाको जिम्मेवारीबाट पनि भाग्न सक्दैनन्। त्यसैले तपाईका लागि कामसँगसँगै बच्चालाई पनि प्राथमिता दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बच्चाका लागि पुरै समयको तालिका बनाउनुहोस्। यो समयमा तपाईले ध्यान दिनुहोस् की विहान र वेलुकी बच्चालाई तपाईले समय दिन जरुरी छ। दिउँसोको समय अफिसका लागि दिन सक्नुहुनेछ।
२) सन्तुलन मिलाएर हिँड्नुहोस्
तपाईको अफिसको समय निश्चित गर्नुहोस्। वेलुकी सही समयमा घरमा फर्किनुहोस् । यो कुराको ध्यान दिनुहोस् की तपाईको परिवारको जिम्मेवारी तपाईसँग छ। टाढा जब गर्नुको साटो घरकै आसपास काम गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुने गर्दछ। जरुरी परेमा तपाई घरमा आउन समस्या नहोओस्।
३) मिलीजुली काम गर्नुहोस्
कुनै कामका लागि घरका अन्य सदस्यको सयोग लिनु नराम्रो होइन्। एक्लै सबै काम सम्हाल्नु सजिलो हुँदैन्। कहिले काही पति, सामु वा अन्य सदस्यसँग आफ्नो समस्या खुलेर भन्नुहोस् र आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग लिनुहोस्। यस्तो अवस्थामा काम चाँडै सकिन्छ र परिवार सँगसँगै अफिसमा पनि काम राम्रो हुने गर्दछ।
४) ओभर टाइम काम नगर्नुहोस्
तपाई आफ्नो जिम्मेवारी तब राम्रोसँग निभाउन पाउनुहुनेछ, जब तपाई तनाव मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसैले आफूले आराम गर्न पनि जरुरी छ,ता की तपाई घर परिवारसँग पनि राम्रो व्यवहार गर्न सक्नुहोस्। सबै काम गर्दा तपाई त्यसै थाक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि ओभर टाइम काम गर्ने गल्ती नगर्नुहोस्।
५) बच्चाका साथ शनिबार मनाउनुहोस्
बच्चालाई आफ्नो छुट्टी भन्दा बढी आमाको विदाको प्रतिक्षा रहने गर्दछ। त्यसैले उनीहरुको चाहना पुरा गर्नका लागि मुख्यमुख्य काम चाडैँ सकेर बच्चासँग विदा मिलाउनुहोस्। विदाको पुरा समय बच्चा र परिवारलाई दिएमा खुसी सँगसँगै एक्लोपनाको महशुस नहुनुका लागि राम्रो आमा, पत्नी र बुहारी बन्न सक्नुहुनेछ।
भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी भेन्टिलेटरमा
कोरोना पुष्टि भएको भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। उनलाई कोरोनाबाट सङ्क्रमितको सम्पर्कमा
महात्मा गान्धीको चस्मा लिलामीमा राखियो, मूल्य २३ लाख !
कोरोनाले मृत्यु भएकी महिलाको शवबाट सुनको चुरा चोरी !
चराका बच्चा नमरुन् भनेर यो गाउँका मानिस ३५ दिन अन्धकारमै बसे
बिहे गर्नुपर्ने माग राख्दै युवकको घर अगाडि प्रेमीकाको धर्ना
अर्पाटमेन्टमा आगलागी भएपछि दुई बालक हाम फालेर यसरी बाँचे (भिडियो)
यी हुन् रिलेशनमा रहेका व्यक्तिले गर्ने गल्ती